स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुदानको नाममा रकम जथाभावि बाँड्यो
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुदानको नाममा रकम जथाभावि बाँड्यो
काठमाडौं, १९ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने नाममा जथाभावि रकम बाँडेको छ । मन्त्रालयले पुस महिनामा करोडौं रकम सामुदायिक अस्पताललाई बाँडेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेको जथाभावि रकम बितरण गरेका हुन् । एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डे संचालक रहेको मनमोहन सामुदायिक अस्पताललाई ३ करोड रुपैया अनुदानका नाममा बितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिमलेन्द्र नीधि संचालक रहेको महेन्द्रनारायण निधी मेमोरियल अस्पतालाई पनि ३ करोड अनुदान दिइएको छ ।
त्यसैगरि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला संचालक रहेको बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताललाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यस्तै कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला संचालक रहेको सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टलाई एक करोड १४ लाख अनुदान दिइएको छ ।
स्वस्थ्य मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पतालाई अनुदान दिने गरेको छ । तर सामुदायिक अस्पताल भन्दा बाहिर निजामति कर्मचारी संघलाई ८ लाख अनुदान दिएको भने नेपाल चिकित्सक संघलाई १ करोड बीस लाख अनुदान दिइएको छ । क–कसलाई पैसा बाड्यो लिष्ट सहित सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्ट ५४,००,०००।००, संजिवनी सेवा संघ वीर अस्पताल ६,००,०००।००, मनमोहन सामुदायिक अस्पताल २,७०,००,०००।००, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ४,४०,००,०००।००, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति ६८,२०,०००।०० मनमोहन सामुदायिक अस्पताल ३०,००,०००।००, नेपाल क्यान्सर अस्पताल नेपालगन्ज ३,९०,००,०००।००, नागरिक सामुदायिक अस्पताल भक्तपुर ७०,००,०००।००, महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताल ३,००,००,०००।००, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल ३,००,००,०००।००, गण्डकी ग्रामिण सामुदायिक अस्पताल १,७५,००,०००।००, शहीद स्मृती प्रतिष्ठान ६०,००,०००।००, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद् २०,००,०००।००, नमुना सामुदायिक अस्पताल विकास समिति ४०,००,०००।००, कोशी पुर्व सामुदायिक अस्पताल २५,००,०००।००, सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर ६०,००,०००।००, किशोरी प्रसाद नेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ३०,००,०००।००, शहीद मेमोरियल अस्पताल, कलंकी ४०,००,०००।००, निजामती कर्मचारी संघ ८,००,०००।००, नेपाल चिकित्सक संघ १,२०,००,०००।००, वि.पी. नेत्र संघ ६०,००,०००।००, मातृशिशु मितेरी अस्पताल ६०,००,०००।००, स्पाइनल इन्जुरी पुनस्थापना केन्द्र ५५,००,०००।००, जनस्वास्थ्य सरोकार टष्ट ३,००,००,०००।००, नेपाल मध्यविन्दु सामुदायिक स्मृति अस्पताल २०,००,०००।००लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल ६०,००,०००।००आँधिखोला विकास तथा वातावरण स्वच्छता समूह २०,००,०००।००अपांग वाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र ५,००,०००।००किर्तिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र १३,००,०००।००, धुलिखेल अस्पताल बिकास आयोजना ३,००,००,०००।००, वी.पी.स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लि. १,२०,००,०००।००
मुड परिवर्तन, डिप्रेसन, तनाव र क्यान्सरबाट बच्न आजैबाट यस्ता खानेकुरा खान थाल्नुहोस्